Indoneziana Mandrehitra Labozia Sy Mitaky Ny Rariny Ho An’Ireo Tanora Maty Niharan’ny Fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2016 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, bahasa Indonesia, Español, English
Indoneziana tao afovoan'ny faritr'i Java mandrehita labozia ho an'i Yuyun. Sary an'ny Forum Pengada Layanan. Loharano: ‏@CuteTiel, nahazoana alàlana
Efa ho iray volana izao, tsy dia iasàn'ny olona saina loatra ny vaovao momba ilay Indoneziana ankizivavy 13 taona naolan'ny lehilahy niisa 14 ary novonoin'izy ireo ho faty tamin'ny Aprily lasa teo. Taorian'izay ireo vondrona mpikatroka mafàna fo sy mpiaro ny vehivavy dia nanomboka fanentanana iray taty anaty media sosialy mba hitakiana ny rariny, nanery ny hivoahan'ilay olana ho hitan'ny besinimaro nony farany, ary niteraka adihevitra nanerana ny firenena momba izay hampitsaharana ny herisetra atao amin'ny zaza amam-behivavy.
Hita faty tao aminà toerana iray fambolena fingotra i Yuyun, izay mpianatra sangany tao amin'ny kilasy nisy azy. Nofatorana ny tànany. Roambinifolo amin'ireo noahiahiana ho nanolana no efa voasambotra ankehitriny, saingy mbola miriaria any ny roa. Tsy ampy taona toa an'i Yuyun ihany koa ny ankamaroan'ireo ahiahiana, izay midika fa sazy fampidirana am-ponja mandritry ny 10 taona no ho azon'izy ireo raha hita fa meloka.
Nampiasaina hiraisan'ny olona ny tenifototra #nyalauntukyuyun (“Mandreheta Labozia Ho An'i Yuyun”) mba handrehitra labozia iray sy hitaky ny rariny ho an'ilay zazavavy.
Nizara ny fitserany sy ny fiombonampony amin'ny fianakavian'i Yuyun ireo mpampiasa aterineto, ary nivoady koa ny filoha Indoneziana Jokowi fa hisambotra ireo nahavanona ny loza:
Nalahelo avokoa isika rehetra tamin'ilay namoizana an'i YY tamin'ny fomba mahatsiravina. Tsy maintsy samborina ireo nanatanteraka izany ary hahazo ny sazy faratampony. Tsy maintsy arovana amin'ny herisetra ny zaza amam-behivavy.
Marobe ihany koa ireo nandrisika ny handaniana ilay tolodalàna momba ny Fanafoanana ny Herisetra Ara-nofo:
Hiadana anie ianao any amin'ny fiainanao manaraka any. Mba hitondra fiovàna sy hanampy hiarovana vehivavy hafa anie ny fahafatesanao.
Firaisankina ho an'i Yuyun. Atsaharo ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Fanangonantsonia ho an'ny Kaomisiona faha-VII -n'ny Antenimieram-Pirenena mba handany maika ny Lalàna momba ny Famongorana ny Herisetra Ara-nofo.
Fanomezantsiny ny Niharam-boina
Na teo aza ireo hafatra niraradraraka naneho fiarahamiory famin'ny fianakavian'i Yuyun, misy ihany koa ireo izay nisafidy ny hiampanga ireo niharam-boina ho nihantsy ireo lehilahy hanolana sy hamono azy.
Nalahelo tamin'io toetsaina io i Diana Nurwidiastuti, iray efa niharan'ny filàna sotasota ara-nofo:
Satria matetika isika no manao tsinontsinona ireo niharan'ny fanolanana. Satria mbola ny endrika ivelany foana no anomezantsika tsiny azy ireny, ny zipokeliny no lasa anilihana ny fakampanahy tsy hay tohaina. Satria mbola inoantsika ny hoe ankafizin'ireo niharany ny firaisana ara-nofo atao an-terisetra. Satria isika mandrisika ireo niharan'izany tsy hiady hanohitra. Satria inoantsika fa indray andro any ireo niharan'izany dia mbola hamorona indray mpanao heloka hafa ary dia borobory vetaveta izy io. Ary mbola mino isika fa zavapady iray sy loza mila hadinoina ny fanaovana herisetra ara-nofo.
Ny sasany nanatsiny ny alikaola ho antony mitondra ho amin'ny fanolanana. Tifatul Sembiring, minisitra fahiny avy amin'ny antoko Islamista mino fa, ny lalàna mandrarà ny alikaola no maika indrindra ny fandaniana azy raha miohatra amin'ny tolodàlana Fanafoanana ny Herisetra Ara-nofo:
Ny alikaola no fototry ny ratsy rehetra. Feno porofo manodidina antsika: fanolanana, vono olona, fanendahana, famonoana vady. Tohano ny Lalàna mandrara ny Alikaola.
Raisina hatrany ho toy ny heloka an-tokantrano ary mazàna no tsy mba voatatitra ao Indonezia ny heloka bevava atao amin'ny tsy ampy taona. Amin'ny ankamaroany dia mivoaka amin'ny famoahambaovao ao an-toerana ny resaka fanondranana olona sy ny herisetra atao amin'ny tsy ampy taona, ary zara raha ifantohan'ny saina manerana ny firenena.
Tamin'ny taona lasa, nilaza ny Kaomisiana Indoneziana ho Fiarovana ny Ankizy fa teo anelanelan'ny 2010 sy 2014 dia maherin'ny 21 tapitrisa ny tranganà fanitsakitsahana zon'olombelona nanjo ny ankizy, 58 isanjaton'izany dia herisetra ara-nofo avokoa. Nandritra izany fotoana izany, ny Kaomisionam-Pirenena ao Indonezia momba ny Herisetra Manjo ny Vehivavy dia nandrakitra tranganà herisetra niisa 16.217 natao tamin'ny vehivavy nandritry ny taona 2015.